Nhau - Yakakwira mhando Simbi Inodakadza
Yakakwira mhando Simbi Inodakadza
Ungade here kugadzira mamwe emhando yepamusoro masimbi kune ako accessories? Ndokumbirawo uuye ubatane nesu, Pretty Shiny Zvipo zvinozadzisa chishuwo chedu uye nekuunza pfungwa yako muhupenyu chaihwo.
Isu takapa hukuru hwakavhurika dhizaini yeyakapenderedzwa mitsipa, zvishongo zvemashiripiti, zvipfuyo zvemhuka, Krisimasi chishongoyako yaunosarudza kubva, iyo yaizochengetedza yako yekuchaja chibharo, uye panguva imwecheteyo, tsika dhizaini zvakare inogamuchirwa kwazvo. Kune akasiyana magadzirirwo etambo ane akasiyana zvinhu, mameseji, uye ruvara zviripo. Isu tine chokwadi chekuti raizoita zuva rako neiyo DIY chishongedzo kune zvako zvishongedzo, senge bhukumaki, kutora, pendant, wristband, waini mazango, smart phone, mota uye nezvimwe.
-Material: kufa uchikanda zinc alloy kana pewter, kufa yakarova ndarira kana iron, aluminium
-Color: yakagadzirirwa kusanganisira yakajeka ruvara rwakazadzwa, akasiyana ekudhinda
-Kupedzisa: inopenya goridhe / sirivheri / nickel / mhangura, nhema nickel, mat kana antique kupera
-Kukodzera: zvakasiyana siyana zvinowanikwa
-MOQ: 100pcs / dhizaini
-Packing: standard poly bhegi kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Kunze kweyakajairwa kupera, isu zvakare tine iyo UV kudhinda simbi mazango keychainsinova edu matsva maitiro zvigadzirwa. Uku kushamisika kunoshamisa kune iyo 3D simbi marogo akaiswa pane yakazara ruvara kumashure. Ita kuti dhizaini yako ive inokwezva & kubata maziso.
Nedu saiti yedu yekugadzira pamusoro pe64,000 mativi emamirimita uye 2500 vane ruzivo vashandi pamwe nemichina yakakwana & yepamberi, isu tiri ivo vagadziri vane ruzivo vanogadzira tsika dzakagadzirwa nemazango. pini, mari, makhafu, tayi mabhagi uye zvimwe zvinhu zvekusimudzira zvine anopfuura makumi matatu emakore.
Unoda kuziva zvakawanda nezvezvishongo? Ndokumbira utumire ako dhizaini mazano uye saizi, huwandu hweruzivo kune sales@sjjgifts.com, tinogona kuendesa ako echiratidzo marogo mune akanakisa zvigadzirwa.